OMN: ዕለታዊ ዜና (LIVE) April 9, 2018
Gudeedanii tan ajjeesan dhalattuu harargee bahaa yookiin dhalattuu Qobboo qofaa miti.
Dhalattuu oromoo miliyoona 70 hundaati.
Tan gudeedanii ulfa wojjiin ajjeesan sun dubartii oromoo qofaa miti.Hunda keenya dhiira, dhalaa, manguddoo, daa’ima, beekaa wollaalaa, dargaggeessaaf, dargaggeettii oromoodhaa hunda gudeedanii ajjeesan.
Oromoo saalfiin kana caale hin jiru, salphinni kanaa olii hin jiru. Iddoo jirtuu ka’ii iyyi.
Ilmaan kee aangoo mm qabate yoo salphina kana sirraa kaasuuf daqiiqaa tokkos fudhatuu dhabee qaanyii jalaa si hin baasin bu’aan siif qabu maaltu jira. Yeroo orminuu nu abdatu keessatti nuti dhiiga lolaasuun, osoo hin dhalatinuu ajjeefamuun waan yeroo OPDO’f kennuuf caldhisuu dandeennuu oromoo ?
Dubartoota Oromoo ulfa ta’anii waraana Agaaziin galaafataman:
1) Shaashituu Mokonnon – Mudde 29, 2015 Horroo Guduruutti. Shaashituu ulfa ji’a jahaa kan turte yoo taatu sayyuu ishee Qananii Taammiruu jedhamtu waliin ajjeefamtee hurufa keessatti gatamte. Reeffi dubartoota kana lamaanii guyyaa sadii booda argame.
2) Bashulaa Gammachuu – Haadha ilmaan jahaa fi ulfa baatii torbaa kan taate Bashulaan Godina Arsii Lixaatti Guraandhala 27, 2016 humnoota Agaaziin haalaa suukanneessaa ta’een ajjeefamte.
3) Siifan bara 2016 irrecha irratti. Ulfa baatii jahaa yoo taatu, abbaa manaa isheerraa akkuma addaan baateen ajjeefamte.
4) Ayaantuu Mohaammad Shaanqoo- Aanaa Dadar magaalaa Qobboo yoo taate eda halkan 8/04/2018 yaalii gudeeddaa Agaaziin irratti raawwachuuf deemtu jalaa of baraaruuf gaafa iyyitu waraanni Agaazii sadii ta’an ajjeesanii biraa deeman.
Yakki akka kanaa bakka tokkotti dhaabbachuu qaba.
ONN:የውይይት መድረክ/ በወቅታዊ ሁኔታ ላይ የተደረገ ውይይት
Tension in Qobbo East Hararge Today